काठमाडौं । के तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा वि’षा’लु भ्यागुताबारे थाहा छ ? यो भ्यागुता विश्वभरि त’स्करी गरिन्छ । उक्त भ्यागुता यति वि’षा’लु छ कि यसले १० जना मा’निसलाई सि’ध्याउन स’क्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कालो बजारमा यस प्रजातिको भ्यागुताको मूल्य २ लाख ३२ हजार रूपैयाँ भन्दा धेरै रहेको छ । आउनुहोस् आज हामी त्यस्ता भ्यागुताहरूबारे जानकारी लिन जाँदैछौं ।
आखिर किन ती भ्यागुत्ताहरुको त’स्करी गरिन्छ ? अब, तिनीहरूलाई बचाउन कुन अभियान भइरहेको छ ? भ्यागुताको यस प्रजातिको नाम पोइजन डार्ट फ्रुग हो । यो लोपोन्मुख प्रजातिको भ्यागुता हो । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू पहेंलो र कालो रंगका हुन्छन्। केहि हरियो–उज्यालो सुन्तला र केहि नीलो कालो हुन्छन् ।
यस भ्यागुताको वि’ष’को का’रणले, यो विश्वभर त’स्करी गरिन्छ । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू १.५ सेन्टीमिटर लामो हुन्छ तर केहि ६ सेन्टीमिटरसम्म लामो हुन्छन् । औसत तौल २८ देखि ३० ग्राम हुन्छ । तर तिनीहरू भित्र एक त्यस्तो वि’ष हु’न्छ जसले १० जना मा’निस सि’ध्याउन स’क्छ ।
यो प्रायः बोलिभिया, कोस्टा रिका, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, भेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेन्च गुयाना, पेरू, पनामा, गुयाना, निकारागुआ र हवाईको उष्णकटिबंधीय जंगलमा पाइन्छ । न’र भ्या’गुताहरूले मात्र आफ्नो अण्डाको ख्याल राख्छन् । ती पातहरू, खुला जराहरू, वा भिजेका सतहहरूमा लुकेका हुन्छन् । हालै ४२४ साना भ्यागुताहरू बोगोटाको अल डोराडो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको झोलाबाट फेला पारिएको थियो ।
यी प्रत्येक भ्यागुतोको मुल्य २ लाख ३२ हजार रूपैयाँ भन्दा धेरै रहेको थियो । यी भ्यागुताहरू मध्ये केही म’रेका थिए, तर सबै अ’त्यधिक वि’षा’लु थिए । जर्मनीको हम्बोल्ट इन्स्टिच्युटका अन्वेषकहरूले कोलोम्बियामा २०० भन्दा बढी उभयचरहरू ख’तरामा प’र्ने चेतावनी जारी गरेका थिए । त्यसमा धेरै जसो भ्यागुताहरू विशेष माथि उल्लेख गरेको भ्यागुत्ता पनि रहेको छ । यसको रंग र वि’षले य’सलाई बहुमूल्य बनाउँछ ।
यी भ्यागुताहरुलाई १६ बर्षदेखि बचाउने प्रयास जारी गरिएको छ। तर तिनीहरूको त’स्करीमा कुनै कटौती भएको छैन। कोलोम्बियामा यससँग सम्बन्धित प्रजातिहरूको सुरक्षाको लागि वाणिज्य प्रजनन कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो, ताकि यी जीवहरू बचाउन सकिन्छ। धेरै संघर्ष पछि, २०११ मा, यस प्रजनन कार्यक्रम अन्तर्गत, पहेंलो पट्टीको साथ वि’षा’लु’ डा’र्ट फ्रुगलाई कानूनी रूपमा निर्यात गर्न अनुमति दिइयो ।
२०१५ सम्ममा, यो भ्यागुता जस्तो तीनवटा प्रजातिको निर्यातलाई अनुमति दिइयो । यस प्रजनन केन्द्रमा अब भ्यागुताका सात प्रजातिहरू पैदा भएका छन् । यस पछि, तिनीहरू अमेरिका, युरोप र एशियामा पठाइन्छन् । हालसालै गरिएको एउटा अध्ययनमा देखिएको कुराले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।
२०१४ देखि १७ को बीच अमेरिकामा विभिन्न किसिमका भ्यागुताहरू फेला परेका थिए, वि’षा’लु डार्ट फ्रुगको ठूलो हिस्सा थियो । यी भ्यागुताहरूको वि’ष औ’षधीहरूमा प्रयोग हुन्छ । एनाल्जेसिक औषधिहरू ति’नीहरूको वि’षबाट ब’नाइन्छ । वि’षा’लु डा’र्ट फ्रु’गबाट लिइएको वि’षा’लु औ’षधिहरू मो’र्फि’नभ’न्दा २०० गुणा बढी प्रभावकारी हुन्छन् ।
त्यसैले गर्दा ती दु’खाइ क’म ग’र्ने औ’षधीहरूको क्लिनिकल परीक्षणहरू अझै भइरहेका छन् । किनभने १० देखि २० मानिस वा १० हजार मुसा तिनीहरूको वि’षद्वारा मा’रि’न स’क्छ’न् । अहिले वि’षको ती’व्रता क’म गर्न कोसिस गरिदैँछ ताकि उनीहरूलाई औषधीमा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् ।